ပဲခူး – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒေသတစ်ခုဖြစ်သော ပဲခူးသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနီးတွင် တည် ရှိပါသည်။ယခင်က ဟံသာဝတီဟုခေါ်တွင်ခဲ့သော ပဲခူးမြို့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၏မြို့တော် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၈၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသောပဲခူးမြို့သည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သို့လာသော ဧည့်သည်များအတွက် ကျော်ကြားသော လည်ပတ်စရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ပဲခူးမြို့သည် ဧည့်သည်များကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော သဘာဝနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ပဲခူးမြို့သည် လက်မှုပညာကြောင့်သာမက ကျယ်ပြောသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောများကြောင့်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ ဆင်စခန်းများ ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမှသည် ပဲခူးမြို့၏ မြို့ပြလူနေမှုဘဝများကို တွေ့ကြုံခံစား ခြင်းတို့အထိ ကျယ်ပြန့်လှသော အတွေ့အကြုံများကို ဧည့်သည်များ ပျော်ရွှင်စွာ ခံစားနိုင် သည်။
ပဲခူးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသစ်တောအချို့တည်ရှိရာ နေရာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်၏ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို စူးစမ်းလေ့လာဖော်ထုတ်လိုသူများအတွက် အကောင်း ဆုံးနေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုးကျားဆင်စခန်းသည် ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဧည့် သည်များအနေဖြင့် ဆင်များနှင့်အတူ အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို လေ့လာခံစား နိုင်ပါသည်။
ပဲခူးမြို့တွင် မြန်မာပြည်၏ အလှပဆုံးဘုရားများထဲမှ အချို့လည်းတည်ရှိနေသည်။ဘု ရားများအနက် ရွှေမော်ဓောဘုရား၊ ကြီးမားသောလျောင်းတော်မူဘုရားဖြစ်သည့် ရွှေသာလျောင်း ဘုရားရုပ်ပွားတော်နှင့် ကျိုက်ပွန်ဘုရား၏ အလွန်ကြီးမားလှသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ၄ ဆူ တို့ သည် ပဲခူး၏အထူးညွှန်းဆိုရလောက်သော ဘုရားများဖြစ်ပါသည်။ ပဲခူးမြို့၏ ထင်ရှားသော ဘုရားဖြစ်သည့် ရွှေဆံတော်ဘုရားသည် ဧရာဝတီမြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေမျက်မှန်ဘုရားသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အရေးကြီးသော အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါသည်။ ၁၅၅၆ ခုနှစ်တွင် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး တည်ဆောက်ခဲ့သော ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်သို့လည်း သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်သည်။မူလနန်းတော်တွင် ခန်းဆောင်များနှင့်ခန်းမဆောင်များ ၇၆ ခုရှိပြီး ၁၅၉၉ ခုနှစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် အကောက်တောင်သို့လည်း သွားရောက်ကာ ကျောက်နံရံများ အပေါ်တွင် ထုဆစ်ထားသော ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များသို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာ သင့်ပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသည် ခရီးသွားများကို ပဲခူးသို့လာရောက်ရန် ကြိုလင့် နေသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ ခြောက်သွေ့ဇုန်တွင် တည်ရှိသော ပျူမြို့ဟောင်းများဖြစ်သည့် ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုးနှင့် သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပဲခူးတွင် မြန်မာပြည်၏ အကောင်းဆုံးသော လက်မှုပညာရှင်အချို့လည်း နေထိုင်သောကြောင့် စစ်မှန်သော လက်မှုပစ္စည်းများကို လိုချင်သော ခရီးသည်များအဖို့ ပဲခူးရှိ အလွန်များပြားသော လက်မှု ပစ္စည်းအလုပ်ရုံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုမှ ခဏရှောင်ရှားလိုသော ခရီးသည်များအနေဖြင့် ဗြိတိသျှခေတ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သော တောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် သံတောင်သို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့မြို့သည် ဒေသခံများနှင့် ရင်နှီးမှုရလိုသော ခရီးသည်များအတွက် သာမက အေးမြသောရာသီဥတုကို ခံစားလိုသူများအတွက် များစွာသော အခွင့်အလမ်းကောင်းများပေးစွမ်း နိုင်သည်။
Bago is home to some of the best forests of Myanmar and as such is heaven to someone who wants to explore the wildlife of Myanmar. The Pho Kyar Elephant Camp is located in the Yedashe Township where tourists can enjoy various activities involving elephants. It isareserve forest area on the bank of Thaing creek. The Moe Yun Gyi Wildlife sanctuary is located only 29 km from Bago. It is an ideal place to view some exotic species of birds.
Bago has some of the most beautiful pagodas of the country. Among the several pagodas, the Shwemawdaw Pagoda, the huge reclining Buddha image of Shwe Tha Lyaung and the four giant Buddha Images of Kyaikpun Pagoda deserve special mention. A notable pagoda in Bago is the Shwesandaw Pagoda located on the eastern bank of Ayeyarwady river. The Shwe Myat Mhan Pagoda housing Buddha with golden spectacles is also an important shrine and worthavisit. Tourists can also visit the Kanbawsathadi palace, built by King Bayinnaung in 1556. The original palace consisted of 76 apartments and halls which were burned down in 1599. The palace has been restored in 1992. Tourists should also visit Akauk Taung and see the famous Buddha images curved on cliffs.
An array of cultural experiences awaitsatourist at Bago. Tourists can visit Pyu Ancient Cities of Halin, Boekthano and Sri Ksetra located in the dry zone of the Ayeyarwady River Basin. They have been designated as UNESCO World Heritage Site since 2014. Some of the best artisans of Myanmar live in Bago. Hence, tourists looking forward to shopping for some authentic handicrafts can visit the innumerable handicrafts workshops located here. Tourists looking to escape the warm temperature can head to Than-Daung,ahill station established during the British era. The town provides lots of opportunities to enjoy the cool weather as well as bond with the local people.
ဖိုးကျားသစ်တောအပန်းဖြေစခန်းသည် ရေတာရှည်မြို့ရှိ သာဂရတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မှ ၂၉၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပါသည်။ အဆိုပါစခန်းတွင် ဆင် ၁၄ ကောင် ရှိပြီး ဆွာ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေထဲရှိ ‘သိမ်’ ချောင်းကမ်းပါးတွင် တည်ရှိပါသည်။
အဆိုပါထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ငှက်များ၏ ဘေးမဲ့တောသည်ဧရိယာ ၁၀၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး ပဲခူးမြို့၏ အရှေ့မြောက် ၂၉ ကီလိုမီတာအကွာရှိ ပျဉ်ပုံကြီးကျေး ရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရေဌက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆၅ စိတ်နှင့် ဆောင်းခိုငှက် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆၀ တို့ နေထိုင်ကျက်စားရာ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါဘေးမဲ့တောသည် နိုဝင် ဘာလမှ မတ်လအတွင်း အရောင်အသွေးစုံလင်လှပသော ဆောင်းခိုငှက်များကို စံနမူနာပြ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ကြည့်ရှုနိုင်သော နေရာပင်ဖြစ်ပေသည်။
ပျူရှေးဟောင်းမြို့များတွင် ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ ၊ ကျုံးမြို့များနှင့် မပျက်စီးဘဲ ကျန်နေသည့် အုတ်မြို့ရိုး (၃) ခု ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းအတွင်း ကြီး မားကျယ်ပြောသည့် ဆည်ရေပေးဝေသည့် ခြောက်သွေ့ဧရိယာတွင်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စ၍ ပျူမြို့ဟောင်းသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် UNESCO မှ သတ်မှတ်ခဲ့ သည်။
ဗြိတိသျှလက်ထက် ဝိတိုရိယခေတ်တွင် သံတောင်သည် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခဲ့သည့် တောင်ပေါ်စခန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ သံတောင်၏ ရာသီဉတုသည် သာယာ အေးမြပြီး နေချင်စဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ပူပြင်းရှုပ်ထွေးသည့် မြို့ပြဘဝမှ လွတ်မြောက်လိုသူ ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သော နေရာ တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းဒေသတွင် ရိုးရှင်း၍ ချစ်စရာကောင်းသော ဘွယ်ကရင်လူ မျိုးများ အခြေချနေထိုင်ရာလည်းဖြစ်သည်။
ပဲခူးမြို့၏ ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်ကို ၁၅၅၆ ခုနှစ်တွင် ဘုရင်နောင်မင်းတရာကြီးက တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ခန်းဆောင်နှင့် ခန်းမများ ၇၆ ခန်း ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၅၉၉ ခုနှစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနန်းတော်သည် ၁၆ရာစုရှိ မြန်မာ့အင်ပါယာ၏ခန့်ငြားထည်ဝါမှုကို ဖော်ပြနေသော ပြယုဒ် ဖြစ်ပြီး နန်းတော်ထဲတွင် ဘုရင့်ရွှေရထားလုံးကဲ့သို့သော ပုံတူပစ္စည်းများစွာကို ပြန်လည် ပြုလုပ်၍ ခင်းကျင်းပြသထားပါသည်။
ရွှေဆံတော်ဘုရားသည် ပြည်မြို့၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဘုရားတစ်ဆူ ဖြစ်ပေ သည်။ ‘ရွှေဆံတော်’ ဟု ခေါ်ရခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ဆံတော်ကို ဌာပနာ တည်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အထွက်အမြတ်ထားသော ရွှေဆံတော်ဘုရားကို ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ထားပါသည်။ ဘုရားဉာဏ်တော်အမြင့်မှာ ၃၉ မီတာ မြင့်၍ အုတ်ဖိနပ်မှာ ၈၈ မီတာ ကျယ်ပါသည်။
ဤဒေသသည် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါး၏မတ်စောက်သော ချောက်ကမ်းပါးတွင် ထွင်း ထုထားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် ကျော်ကြားလှပါသည်။ ပြည်မြို့၏ အောက်ဖက် ၃၀ ကီလိုမီတာအကွာခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အကောက်တောင်သို့ သွားသည့် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်သည် ကျေးလက်သဘာဝရှုခင်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်ထားပါသည်။ စိတ်ဝင် စားဖွယ်သမိုင်းဝင်အထောက်အထားများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ထို့ဒေသသည် နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ညှို့ယူဖမ်းစား ထားပါသေးသည်။
မျက်မှန်နှင့် ရွှေရောင်အဆင်းရှိသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရွှေမျက်မှန်
ဘုရားဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံးဘုရားများထဲတွင် တစ်ခုအပါ အဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေမျက်မှန်ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် မတ်လတွင် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ထိုပွဲတော်သို့ လာရောက်ပူဇော်ကြသည်။ ရွှေမျက်မှန်ဘုရားသည် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် လှပသောမြို့ရှုခင်းများနှင့် ဧရာဝတီမြစ်၏ အလှတရားများကို ခရီးသွားများ ကြည့်ရှုခံစားရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၅ ရာစု၌ မွန်ဘုရင်နိုင်ငံ၏ ဟံသာဝတီမြို့ ဟု ယခင်ကသိခဲ့သော ပဲခူးဒေသသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ၈၀ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ပဲခူးမြို့တွင် ရွှေမောဓောဘုရား၊ ရွှေသာလျောင်းဟုခေါ်သော အလွန်ကြီးမားသော လျောင်းတော်မူဘုရား၊ ကျိုက်ပင်ဘုရား၏ ကြီးမားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးဆူနှင့် ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်စသော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော လည်ပတ်လေ့လာနိုင်သည့် နေရာများစွာရှိပါသည်။
ရွှေမျက်မှန်ဘုရားပွဲတော်သည် နှစ်စဉ်က မတ်လ၌ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် အလွန်သပ္ပာယ်၍ ရွှေရောင်အဆင်းရှိသည့် ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်အား လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။ ပြည်မြို့နှင့်အနီးတဝိုက် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ဒေသထွက်ကုန်များ၊ ရိုးရာလက်မှုပညာများကိုလည်း ထိုပွဲတော်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ရွှေဆံတော်ဘုရားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရဘုရားဖူးခရီးစဉ်များထဲတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေဆံတော်ဘုရားပွဲတော်သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ဘုရားဖူးခရီးသွားအ များဆုံး လာရောက်လည်ပတ်သည့် ပွဲတော်တစ်ခုဟုလည်း ဆိုနိုင်ပေသည်။ထိုပွဲတော်တွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ စွယ်တော်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ခန်းမကို ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပသည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့၌ ဘုရားဝတ်ပြုသူများ၊ ခရီးသွားများ ကြည်ညိုဖူးမြော်နိုင်ရန် အတွက် ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိပါသည်။
မိုးတွင်းကာလကင်းလွတ်ပြီးနောက် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး ၌ ထိုပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။ လပြည့်နေ့တွင် ရဟန်းသံဃာများ လိုအပ်သော သင်္ကန်း ဝတ်ရုံများ နှင့်အတူ အစားအစာများ၊ ထီး၊ ညှပ်ဖိနပ်များ၊ ပန်းကန်လုံးများ၊ တဘက်များ၊ ဆပ်ပြာနှင့် အခြားလိုအပ်သည်များကို ကြည်ညိုစွာ ကပ်လှူပူဇော်ကြပါသည်။